I-Steam Sterilizers ephakathi (i-Autoclaves) yomzi mveliso I-China Medium Steam Sterilizers (ii-Autoclaves) abavelisi kunye nabaxhasi
MAST-V (Nkqo sliding umnyango, 280L-800L)
I-MAST-V sisixhobo sokucoca esisebenza ngokukhawuleza, esixineneyo nesisebenza ngeendlela ezahlukeneyo esiphande saza saqulunqa ngokweemfuno zamva nje zeziko lonyango kunye ne-CSSD. Yenzelwe kwaye yenziwa ngokudibanisa amandla aphezulu kunye neendleko-zokusebenza, ngelixa inika ukuthembeka okuphezulu kokusebenza kunye nolondolozo olulula.
Uyilo lwezivumelwano zamagumbi nge-GB1502011 yombuso, i-GB8599-2008, i-CE, i-EN285 esemgangathweni yase-Europe, i-ASME kunye ne-PED.
I-MCSG Umatshini wombane oSulungekileyo wombane
Esi sixhobo sisebenzisa umphunga wamashishini ukufudumeza amanzi amsulwa ukuvelisa umphunga omsulwa. Isetyenziswa ngokubanzi kumashishini ezonyango, amayeza kunye nokutya ukubonelela ngomphunga okwinqanaba eliphezulu ekucociseni inzalo ekumgangatho ophezulu. Iyahlangabezana neemfuno zekhwalithi yomphunga kwaye inokuthintela ngokufanelekileyo ukupakisha okuphuzi kunye nengxaki yengxowa emanzi ebangelwa ngumgangatho omphunga omphunga.
Ucocekile u-Q ucocekile ugesi wombane
Ucocekile uQ weechungechunge ezicocekileyo zombane zivelisa umphunga ococekileyo ngokufudumeza amanzi amsulwa. Inezibonelelo zesayizi encinci, ukufudumeza ngokukhawuleza, akukho kungcoliseka, ukusebenza ngokulula kunye nokuthembeka okuphezulu. Iyakwazi ukusombulula ngokufanelekileyo ukungcoliseka kwerusi kwizixhobo kunye nezinto zokunxiba.
Ingasetyenziswa ngokubanzi kwisebe le-stomatology kunye ne-ophthalmology, igumbi lokusebenza namanye amaziko onyango. Ifanelekile kuzo zonke izixhobo eziqinileyo ezisongelweyo okanye ezingasuswanga, isixhobo esikumgangatho we-A (izixhobo zamazinyo kunye nee-endoscopes), izixhobo ezinokufakwa, ilaphu lokunxiba kunye neetyhubhu zerabha, njl.
MAST-H (tyaba sliding ucango, 1000L-2000L)
MAST-H lolunye uhlobo olutsha lobume be-sterilizer ye-steam enobugcisa obukhulu obunamandla ngelixa unikezela umnyango othe tyaba ngokuzenzekelayo, ulawulo olukrelekrele, ukusebenza okuthembekileyo kunye nolondolozo olulula, olulungele umthengi wenqanaba eliphezulu ngezikali ezinkulu. Iphuhliswa ngokweemfuno zamva nje zeziko lonyango kunye ne-CSSD.
I-MAST-A sisixhobo esitshintshisanayo esikhawulezayo nesisebenza ngeendlela ezahlukeneyo esiphandwayo kwaye siphuhliswa ngokweemfuno zamva nje zeziko lonyango kunye ne-CSSD. Yenzelwe kwaye yenziwa ngokudibanisa amandla aphezulu kunye neendleko-zokusebenza, ngelixa inika ukuthembeka okuphezulu kokusebenza kunye nolondolozo olulula.